विचार मञ्च – Page3– इन्सेक
प्रकाशित मिति : ०७६ चैत ५ गते
आफू र आफ्ना बालबालिकालाई कसरी जोगाउने ‘नोभल’ कोरोना भाइरस के हो ? नोभल कोरोना भाइरस (CoV) कोरोना भाइरसकै एक नयाँ प्रजाति हो। नोभल कोरोनाभाइरसका कारण शुरु भएको रोग चीनको वुहानमा पहिलो पटक पहिचान गरिएको थियो। यसलाई हाल कोरोनाभाइरस रोग २०१९ (अर्थात कोभि....
प्रत्येक वर्षको २१ मार्चका दिनलाई विश्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका’ रूपमा मनाउने गरिन्छ । यो वर्ष ५३ औँ ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’ विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । विश्वमा विविध किसिमका विभेदहरू छन् । कतै रङ्....
प्रकाशित मिति : ०७६ फागुन २९ गते
पाल्पा सदरमुकाम तानसेनबाट झण्डै १५ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ बगनासकाली गाउँपालिका । यही गाउँपालिकाको वडा नं. ७ स्थित खानीगाउँको दैलातुङ र वडा नं. ६ स्थित यम्घाको दर्पुकमा बस्छन् सीमान्तकृत बोटे समुदाय । यी दुवै गाउँ कालीगण्डकीको किनारमै छन् । दैलातुङमा ब....
प्रकाशित मिति : बागलुङ । ०७६ फागुन ८ गते
बागलुङ । ०७६ फागुन ८ गते नेपाल चार जात ३६ वर्णको साझा फूलबारी हो । यो भनाइले जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने तर्क पनि यदाकदा छन् । तर बहुभाषी, बहुजाति र बहुसंस्कृति भएको नेपाल साँच्चै साझा फूलबारी हो भन्दा फरक पर्दैन । साँच्चै सबै जात, सबै धर्म ....
बाल अधिकारको अवधारणाः बाल अधिकारका कुरा गर्नसाथै यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमितर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ । विषेश गरी पहिलो विश्वयुद्धमा भएको गोली बारुद, विष्फोटले सबैभन्दा बढी अशक्त र बालबालिकाहरू पीडित भए । सयौँ बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने हजारौँ अपाङ....
सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन व्यवस्था गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन संविधानले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेको हो । संविधानकै मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय प्रणालीको एउटा हिस्सा हो, सरकार र प्रदेशसभा । आधारभूत सेवासुविधाका लागि विगतजस्तो काठमाडौं धाउनैपर्ने अवस्थाको ....
संविधान जारी गर्ने काम चानचुने थिएन । संविधान सहमतिको दस्तावेज जो बनाउनु थियो । मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गर्नु थियो । सबैभन्दा कठीन र नौलो काम राज्यको पुनर्संरचना थियो । सीमाना हेरफेर गर्नु सहज काम थिएन । ....
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना बनाएको छ साथै, सातवटा प्रदेश भएको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधान बमोजिम बर्दघाट पश्चिमको नवलपरासी, रूपन्देही, पाल्पा, कपिल....
दुर्घटनामा परी प्रकाशको निधन भएको निकै लामो अवधि भयो । मानिसको जीवन कसैको लामो हुन्छ कसैको छोटो हुन्छ । त्यो भनेको भौतिक रूपमा बाँच्ने कुरा हो । तर, मानिसका योगदान चाँहि सधैँ बाँचेकै हुन्छन् । यतिका वर्ष बितेपनि इन्सेकले प्रकाशको निधन भएकै दिनमा प्रक....